अनेक च्यालेन्ज भन्दै कतै तपाईले फेसबुकमा यति ठूलो गल्ती त गर्नुभएन ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/अनेक च्यालेन्ज भन्दै कतै तपाईले फेसबुकमा यति ठूलो गल्ती त गर्नुभएन ?
भारतका चर्चित उद्योगपति मुकेश अम्बानीले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो नयाँ संसारमा डाटा नयाँ सम्पत्ति हो ।’ अहिलेको समयमा जो सँग डाटा छ उ नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । मैले आज यो कुरा किन गर्न खोजेको हुँ भने नेपालमा पछिल्लो समय फेसबुक, ट्विटर लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरै व्यक्तिहरूले आफ्ना र परिवारका तस्बिरहरु धमाधम पोस्ट गरिरहेका छन् ।
धेरै अध्ययनहरुका अनुसार यसका पछाडि कुनै एजेन्सीहरुको हात रहेको हुन्छ । नत्र भने किन कुनै टे«न्ड सुरु भएपछि समाप्त भएर फेरि अर्को सुरु हुन्छ रु मानिसहरु तपाईँको डाटा सङ्कलन गर्न चाहन्छन् तपाईंको परिवारमा को को छ रु तपाईं कस्तो प्रकृतिको मान्छे हुनुहुन्छ रु तपाईंले लेख्ने स्टाटस हरु कस्ता छन् रु तपाईंले राख्ने फोटोहरुका आधारमा हेर्ने गरिन्छ । तपाईंलाई धेरै कुराहरुबाट मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । अहिले बालबालिकाको जस्तो व्यवहार कतिपयले गरिरहेको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहँदा यो सबैलाई बताउनु जरुरी छैन कि तपाईंको परिवारमा को–को हुनुहुन्छ रु तपाईंको छोराछोरी कति छन् ः तपाईंको श्रीमती, तपाईंको घर, तपाईंको गाउँ सबै कुराहरु तपाईले फेसबुकमा राख्नुपर्छ भनेर कतै पनि लेखेको हुँदैन । फेसबुक तपाईं आफूले मात्रै चलाउनुस्, जब तपाँई आफ्नो फेसबुकमा मैँले माथि उल्लेख गरेका कुराहरु ल्याउन थाल्नुहुन्छ त्यो समयदेखि नै तपाँई असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भए पनि हुन्छ । जथाभाबी एप्सहरु डाउनलोड गरेर त्यसमा तपाईँको डाटाहरु पठाउनु पनि गम्भीर गल्ती हुन्छ ।
आज चीनले आफ्नै फेसबुक, ट्वीटर, युट्यब, गुगललगायत सबै आवश्यक प्रविधिको विकास गरेको छ । आज चीनका हरेक जनताको डाटा त्यहाँको सरकारसँग सुरक्षित हुन्छ । अरु देशहरुसँग पनि चीनको बाटोमा छन् तर यो कुरामा चीन अरु देशहरुमा धेरै अगाडि रहेको छ । अमेरिकामा बनेका फेसबुक, ट्वीटर, युट्यब, गुगललगायत हुन् वा चीनमा बनेको टिकटकलगायत एपहरु हुन यी सबैको काम हाम्रो डाटा चोरी गर्नु नै हुन्छ । अमेरिकाको सामाजिक सञ्जाल चीनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन किन रु आफ्ना नागरिकहरुको गोप्य सुचना अमेरिका सम्म पुग्ने डर चीन सरकारलाई पहिलेदेखि थियो । भारतले पनि सावधानी अपनाउँदैछ ।
हामी सबैलाई साबधान हुनुहोस भनेर अनुरोध मात्रै गर्छौ, बाँकी तपाँईको हातमा छ । विगतमा १० वर्षे च्यालेन्जलाई तपाईले हेर्नुभएको थियो भने त्यो पनि निकै चर्चित भएको थियो । १० वर्ष पहिले तपाई कस्तो हुनुहुन्थ्यो रु वा १० वर्षपछि तपाँई कस्तो देखिनुहुन्छ रु लगायतका धेरै कुराहरु तपाँईले हेर्नुभएको थियो । हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेटमा अनेक कुराहरु उपलब्ध हुन्छन् । त्यस्ता धेरै वेबसाइट हरु हुन्छन जुन कानुनीरुपमा मान्यता प्राप्त हुँदैनन् । यदि कानुन कानुनीरुपमा मान्यता प्राप्त भएपनि त्यसमा कसैले केही गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।
धार्मिक आधारमा मानिसहरु लड्दैछन् भने त्यहाँ पनि पुगेर इट्टा थप्ने काम यी एजेन्सीहरु गर्न सक्छन् । यो बाहेक ठुलठुला व्यक्तिहरुको ज्यान लिनका लागि पनि त्यो देशका जनताको मुड पहिले चेक गर्ने गरिन्छ । अहिलेको समयमा आइटीसेल कुनै आ–तंकवादी संस्था भन्दा कम हुँदैन । यी बाहेक अन्य कुराहरु पनि हुन्छन् । हरेक देशका जनताको डाटा संकलन गरेर त्यो अनुसारको परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्ने गरिन्छ । जनबोलीबाट